Umkhuleko wezingane Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ufuna ukufundisa izingane zakho ukuthandaza kepha awazi ukuthi uzoqala kuphi, lapha sizokutshela i- umkhuleko wezingane ezingazenza ekuseni noma ebusuku ngaphambi kokulala.
1 Kungani senza umthandazo wezingane?
2 Umkhuleko wezingane
2.1 Umkhuleko kuNgelosi KaGcini
2.2 KuNkulunkulu ngiqamba amanga
2.3 Jesu omncane wempilo yami
2.4 Amakhona amane amancane
2.5 Ubaba wethu
Kungani senza umthandazo wezingane?
Izingane zivame ukuba nokwesaba, ikakhulukazi ebusuku. Indlela engcono kakhulu yokubazisa ukuthi bavikelekile ngomthandazo, njengoba nje siphendukela kuNkulunkulu ngezikhathi zobunzima, singafundisa izingane zethu ukwenza okufanayo.
Ngakho-ke, uma ingane yakho iqala esikoleni futhi bakhulume nayo ngenkolo futhi ungazi ukuthi ungayilungisa kanjani le nkinga, sincoma ukuthi uqale ukumfundisa inkolo ngomkhuleko, yindlela ezomholela ekwazini uNkulunkulu kusuka ngendlela elula futhi izokugcwalisa ngothando.
Futhi, indlela elula yokufundisa umkhuleko wezingane Kusesikhathini sokulala, ukwenza isiko lapho uyolala kungazizwa kuvikelekile ngoba kwesinye isikhathi besaba ubumnyama, noma ukuthi kuvela isilo ngaphansi kombhede noma iqiniso elilula lokuba wedwa.
Kulesi sihloko sikulethela imisho elula nejwayeleke kakhulu ukuthi uyifundise ingane yakho kancane kancane njengoba ikhula. Futhi, sikumema ukuthi ufunde indatshana yethu ku Imithandazo yokubhapathizwa.
Obaba bawumthombo wokholo ezinganeni
Isiko lomkhuleko, lisukela eminyakeni eminingi eyedlule, lifaka umthandazo ezinganeni zakho, kufanele libe ngendlela ejabulisayo nokuthi abakuboni njengesibopho noma ukuzibophezela, uma kungenjalo njengesidingo nomkhuba wokukhuluma noNkulunkulu.
Ngesikhathi sokulala yisikhathi esifanele kunazo zonke, ngoba ungakwenza kube yingxenye yenkambiso yasebusuku, ugqoke amaphijama, uxubhe amazinyo, uthandaze futhi ekugcineni uzolala. Sikulethela imithandazo emihle kakhulu futhi ezwakalayo ukuze ukwazi ukuyenza nezingane zakho.
Umkhuleko kuNgelosi KaGcini
Ingelosi egadayo ingomunye wemikhuleko ebaluleke kakhulu ezinganeni, ngoba ngalo mthandazo bavame ukuzizwa bephephile ngoba ingelosi yabo ebabhekile izobanakekela ngenkathi bengena kulowo mhlaba omuhle, okungukuthi el mundo Wamaphupho.
Ingelosi ye-Guardian, inkampani enhle,
ungangishiyi, noma ebusuku nasemini,
uze ungibeke ukuthula nenjabulo
nabo bonke abangcwele, uJesu, uJoseph noMariya.
Mntwana uJesu woza embhedeni wami,
KuNkulunkulu ngiqamba amanga
Komncane kunabo bonke endlini, ongakwazi ukufunda umthandazo omude kangako, sibafundisa ukuthanda uNkulunkulu kusuka kokuyisisekelo, lo mthandazo ungenziwa ngesikhathi sokulala nalapho uvuka.
Ngilala noNkulunkulu, ngivuka noNkulunkulu,
neNcasakazi uMariya noMoya oNgcwele.
Jesu omncane wempilo yami
Ngokufanayo, kufanele futhi sengeze indaba kaJesu Kristu umsindisi womhlaba owasikhulula ezonweni, ngomhlatshelo wakhe, ngakho-ke kufanele ufundise izingane ukuthi uJesu wayeyingane enhle futhi ezinikele ekulaleleni izwi likaNkulunkulu.
UJesuito wempilo yami, ungumntwana onjengami,
Thats why ngikuthanda kakhulu
futhi ngikunikeza inhliziyo yami.
Amakhona amane amancane
Lo mkhuleko ungahambisana nengelosi egadayo, lezo zingane ezisaba ukulala zodwa, ngaphambi kokuyolala ungazithandaza nazo ukuze zizwe ukuthi ubusuku bonke zizoba nengelosi yazo eziyigadayo nezingelosi ezine ezincane ezibheke ukulala kwazo enkampanini kaMariya uMariya.
Umbhede wami unamakhona amane,
izingelosi ezincane ezine ezingigcinela zona,
neNcasakazi uMariya ongumngane wami.
Umkhuleko okumele wonke amaKhatholika awazi uMthandazo weNkosi, ngoba sisebancane abazali bethu basifundisile futhi bawuphinda lo mthandazo. Ngezingane zakho ungayifunda kancane kancane futhi nsuku zonke ungeza okuningi, baze bakwazi ukuyisho ukuthi iphelele.
umbuso wakho mawuze,
Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla,
thethelela amacala ethu futhi
Ungasivumeli siwele esilingweni,
Ngokulandelayo, lo mthandazo ungumphelelisi wabo bonke abanye, akumele sishiye eceleni uMoya oNgcwele, kufanele sazise izingane zethu ukuthi ukhona nokuthi uyinceku kaNkulunkulu emhlabeni.
Udumo kuye uYise neNdodana
manje futhi njalo,
Ngale ndlela, izingane zakho zizokwazi ukuqonda okushiwo yiNkosi yethu uNkulunkulu, kanye nencazelo yomusho ngamunye, ukuze zikwazi ukuqonda okwengeziwe ngenkolo namacebo kaNkulunkulu.
Ngokunjalo, lapho uthandaza nezingane zakho udala isibopho esikhethekile, okuthi lapho bekhula bazozizwa bezethemba ngawe, bazocela izeluleko zakho futhi bazokusiza, ngoba bazozizwa besondelene nawe. Ngakho-ke uma kufika isikhathi sokulala, yibo abazokukhumbuza, mama / baba, isikhathi sokulala, asithandaze, ngoba kuzoba isikhathi sabo sosuku abasithandayo.
Abazali yibo abazosiza izingane zabo ukuxhumana noNkulunkulu. Ngokulandelayo, njengoba bekhula, ukuxhumana kwabo kuzoqina ngokwengeziwe kuze kube semkhawulweni wokuzakhela imithandazo nokubonga uNkulunkulu ngezibusiso abazitholile. Izingane ezisho imithandazo ngesikhathi sokulala zizoncipha kancane ukwesaba ebumnyameni, nokuba zodwa emakamelweni azo.
Umkhuleko engelosini yokuchichima
Umkhuleko kaSanta Francis